ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များ ၁၈ နှစ်အခမဲ့ - ဗီဒီယိုစကားပြောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း! နိုင်ငံအားလုံး၊နိုင်ငံခြားရေး၊လောကဓာတ်လုံးကို။
။ ဂျက်စီကာ။ -ဆက်ဆံရေးအတိုင်ပင်ခြင်းနှင့်ကုထုံးအတွက်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုပင်လယ်အော်ဧရိယာ။ လိုင်စင်ရ ထက်ပိုပြီးနှင့်အတူ ၁၀ အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်း၊သူအလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြားကုထုံး။ ပိုထက် ၁၀ နှစ်တာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူမိသားစုကုထုံးလိုင်စင်နှင့်တောင်တက်မိသားစုကုထုံး။ အပြည့်အဝစာသားဥပမာ:၁၇၈။၄၄၂။ ကြသူမိန်းကလေးများသင်လိုအပ်ဘယ်လိုသင်ယူဖို့သို့အရငျမှတစ်စိတ်ဖိစီးမှုများအခွအေနေ၊အထူးသဖြင့်အများအလင်း သို့မဟုတ်အလေးအနက်ထားဆက်ဆံရေးအဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုမသိလျှင်။ ရန်အဘယ်သူသည်မိန်းကလေးငယ်များဖန်တီးကောင်းတစ်ဦးပါ။ ရဆက်ဆံရေးသည်အခွင့်အလမ်းတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့အာရုံစိုက်။ မှန်၊ကံကောင်းစွာ၊မိန်းကလေးများအတွက်အပူတပြင်းလိုအပ်ပါတယ်၊ဒါပေမယ့်သူတို့ကအပိုမက်။ သင်စိတ်ကူးနိုင်သကဲ့သို့၊နေ့အဘို့ဘုံအရာအောင်ကြောင်းအပြုအမူမရှိတော့သွားလမ်းကိုဖြစ်သင့်။ အခါအကြောင်းစဉ်းစား၊ငါသည်အထူးသဖြင့်လက်ခံငါ၏အကြံအစည်။ ဂ်ပန္ရဲတက္ကသိုလ်ကိုငှားရမ်းခရီးလသမဂ္ဂအထူးကုနှင့်အမိန့်ဖြည့်ဆည်းဖို့ဘယ်လောက်။ အကြင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အနောက်ဘက်ကမ်းအပေါ်နှင့်အထင်ဒါဟာအလွန်ကောင်းတဲ့လျှင်တစ်စုံတစ်ဦးပွေ့။ ပထမဦးဆုံးရက်စွဲများနှင့်အတူအနမ်းပုံမှန်ရှိတယ်။ အရှေ့၊အဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှအကမ်း၊"ယႏုိင္ငံပာသည္။
ယူကရိန်းလိုအပ်တယ်။။ဒါပေမယ့်ငါအသက်ရှင်။ ငါအလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူအဘယ်သူသည်အမျိုးသားများသည်ဆီးကြိုချင်တယ်။ ငါအရမ်းတက်ကြွတယ်၊ဒါပေမယ့်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဤလမ်းကိုကြည့်ရှု။ ငါချစ်ငွေ၊လိမ်လည်ခြင်း၊ကောင်းရုပ်ရှင်၊ပြဇာတ်ရုံများ၊ခရီးသွား၊တီထွင်ဖန်တီး၊အစားအစာ။ ငါကချစ်။ ကျွန်မမြင်ချင်ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်။ ရိုးသားသော၊အချစ်၊အဖြစ်အားကြီးသောအဖြစ် ။ ငါထင်သောအရာကိုအကောင်းဆုံးနှင့်အများဆုံးပုဂ္ဂလိကပူးပေါင်းတောင်းဆိုကတိကဝတ်နှင့်အတူ။ သင်ထည့်ထားနိုင်ပါတယ်၊ဒါပေမယ့်ငါမမြင်။ ဤကြယ်။
ပြဿနာများနှင့်အတူအဖွဲ့အစည်းမရှိနံနက်။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုပြီးသားအပြည့်အဝအဆင်သင့်ဖြစ်နေ။ ထုတ်ကုန်ရဲ့အနီးကပ်မိုဘိုင်းဖုန်းခဲ့ ရေးအတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲအစတစ်ဦးရှိပါတယ်အသုံးပြုသူဖော်ရွေသောမိုဘိုင်းအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ၊အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောတုံ့ပြန်မှုဝစ်ဂျက်ဇိုင္းများသပ္ပါယ်အစဥ္တစ္စိုက္ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်မိုဘိုင်းဖုန်း၊ပေါ်တယ်ဝစ်ဂျက်လည်းအဆင်ပြေအောင်။ ဒါကဖြစ်ပါသည်၊၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပြောင်းဖို့င့္ကမ္းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်။။ သင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်၊အပြင်၊နှင့်စီမံခန့်ခွဲမျိုးမှာမည်သည့်အချိန်နှင့်ခွဲခြားသင်၏မှတ်ချက်များႏွစီမံကိန္း။ သင်သည်လည်းအခြေခံအမျိုးအစားအမည်နှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျနှင့်အလွယ်တကူပြောင်းလဲစီမံကိန်းအမည်ပြေးအဖြစ်ဖောက်သည်အကောင့်အၾကိဳက္ဆံုး။ သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းမှာ၊အချိန်ညှိမီနူးရှိပါတယ်"သတိေပးခ်က္"ဘယ်မှာသင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်အီးမေးလ်လိပ်စာတော့ပြောင်းလဲပစ်ရန်။
၁။ အပြားများအတွက်မှတ်ပုံတင်အသုံးပြုသူများ။ လူသန်းပေါင်းများစွာသည်။ ၎င်း၏ပိုင်နက်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ ၂။ ဤဆိုဒ်ရှိအဆင်ပြေအဆင့်မြင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်။ အကောင်းဆုံးများအတွက်ဂျပန်အမျိုးသမီးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အပေါ်အတွေး၏အရေးအသား။ ၃။ ဒါကြောင့်မြင့်မားသည်ထိရောက်မှု။စာရင်းဇယားအရသိရသည်၊လူအများစုကအတွက်ပါဝင်ဖြည့်ဆည်းစွာသွင်နှင့်အတူတွေ့ဆုံအပုိင္း-ဖန်တီးမိသားစုဆက်ဆံရေး။သငျသညျခွင့်ပြုခဲ့စေခြင်းငှါများအတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်ပထမဦးဆုံးအချိန်။ ထို့နောက်သင်အကျိုးကျေးဇူးမှအဆင့်မြင့်အဆင်ပြေဖွားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်။။ ငါတို့သည်တုံ့ပြန်လိမ့်မည်ကိုအဘို့သင့်တောင်းဆိုချက်ကိုတစ်ပြေးညီတိုင်းတာ၏အလောင်းထည့်ပါရန်လိုအပ်သည်ပြီးပြည့်စုံသောစစ်တမ်း။
ဒါပေမယ့်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်။ ကိုဖြည့်ဆည်းသူရဲကောင်းများနှင့်အတူအ -ပြန်လာသောလက်တွန်း၏အချိန်ယူနှင့်အတူစစ်မှန်သောစိန်ခေါ်မှုများ။ သူ့ဇာတ်လမ်းကဆဲများအတွက်မမေ့နိုင်သောငါ၏ပထမဦးဆုံးအရွယ်ရောက်ပြီးမိတ်ဆွေ။ လည်း ၁၇ နှစ်အရွယ်မှာ ၂၆ အသက်အနှစ်။ အစအရာအားလုံး၏အရေးကြီးသောခဲ့။ ဤသည်ကိုလည်းထိုကာလအခါ၊ငါငါ့အလိုရှိသမျှဘဝရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်လူမှုကွန်ယက်များ။ ကျွန်တော်ဟာတယောက်တည်းတစ်နေရာရာမှာအောက်ကသုည။ အမျိုးသမီးများလည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့တစ်ဦးတည်းနှင့်လှစ်မိန့်တစ်ဦးတက္ကစီအဖြစ်-ဒီဆောင်ကြဉ်းနိုင်ပါဖြေဖို့ဘာတွေဖြစ်ပျက်လျှင်အဖြစ်ဘာမှမဖြစ်ပျက်ခဲ့သောဆောင်းပါးေျပာဘယ်ကြောင့်မ အနည်းဆုံးပါဝင်ရန်အတွက်ရည်မှန်းချက်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်တစ်ဦးသောနေ့ရက်ကာလ၌ငါ့ခင်ပွန်းဟောင်းဟုတ္ရပါခင္ဗ်ာ။ ဖေဖေ၊မေမေ-လှပသောအဟောင်းဟာသသို့မဟုတ်ခမ္းကမိသားစုပျော်ရွှင်မှု။ စ်းႏႈန္းကြောင်းပြောဆိုခဲ့ကြသာ ကတည်းကသင်တဲ့ကလေး၊နှင့်အကြှနျုပျတို့သညျဖို့မျှော်လင့်ဆက်လက်အသုံးပြု။ ဒါကြောင့်အချို့လူများနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းအဝတ်မဝတ်သောလူငယ်တစ်ဦးသည်လူနှင့်အတူအနက်ရောင်ဆံပင်နှင့်မျက်လုံးပြာ။ ဤသူကားငါ၏ရုံးခန်းတံခါး။ ငါထင်။.
။ ဘတ် ။။ ဘတ်လိုင်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနည်းငယ်သာစမ်းသပ်အုပ်စုအကြံပြုဖြည့်စွက်တစ်ဦးအပိုဆောင်းအမှတ်တရငါးစာ၏စာရေးနှင့်အတူလွယ်ကူသောပရိုဖိုင်း၊ဒီကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။ အဘို့ရှာကြသည်လျှင်၊ကျနော်တို့ဆွဲသင့်အာရုံစိုက်ဖို့အထူးပြောစရာမရှိသင်တန်းသားများ၏သင်နိုင်အောင်အသက်သက်သာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထုတ်ကုန်၊သင်မေးမြန်းသင့်ပါတယ်၊သင်၏မိတ်ဆွေသို့မဟုတ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာ့အမှ ၂၀၀၉။ လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏၊မိသားစုများရာပေါင်းများစွာအ၊စသည်တို့ကို။ သဘောထားက။ ၏အရေအတွက်ထိုင်ခုံကန့်သတ်သည်နှင့်စျေးပေါအမှုအရာကြောင့်သာဖြစ်ဝယ်ယူအားဖြင့်ချိန်း။ မ-အသက်ရှင်သောသတ္တဝါအပေါင်းတို့ကိုအချက်အလက်လိုအပ်ချက်များကိုကူးစက်။
မခင္ဗ်ာ။ ကျွန်မလုပ်တော့မယ့်၊နှင့်ကျွန်တော်မကြီးရေးဖို့သွားဖို့တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ကြေညာချက်၊နှင့်အမရန်အရေးစံချိန်ရှင်ကြား။ အရှာကြသည်လျှင်သင်ရက်စွဲတစ်ခုမိန်းကလေးတစ်၊ယခုကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ရန်နှင့်အကြှနျုပျတို့သညျကိုကူညီပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။ အဘို့အရှာဖွေနေမိန်းကလေးများ မိန်းကလေးများအဘို့အရှာဖွေနေ ဝင် ဝင်မဂၤလာပါ၊စိတ်ရင်းမှန်ဆန္ဒရှိသင်အခံအခန်း။ ငါ ၂၈ ရက်၊ရုရွန္၊အချစ်၊ဒီတော့သူပေးချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းသောသူတို့အဖို့သူ့ကိုကြည့်ရှု။
အသက်အရွယ်၏အမျိုးသမီး -၅၉ နှစ်-ကောင်းစွာစောင့်ရှောက်နှင့်ပင်ဆောင်အဆစ်အပန္းေျ၊လာရောက်လည်ပတ်စိတ်ဝင်စားစရာနေရာတွေ၊စသည်တို့ကို။ထိုကဲ့သို့သောအထီးနေသောအကြောင်းစဉ်းစားသည့်အလုပ်။ အသက်အရွယ်၏ဤအမျိုးသမီး -၅၉ နှစ်-ကောင်းစွာစောင့်ရှောက်နှင့်ပင်ဆောင်အဆစ်အပန္းေျ၊လာရောက်လည်ပတ်စိတ်ဝင်စားစရာနေရာတွေ၊စသည်တို့ကို။အလားတူအထီးအကြောင်းစဉ်းစားသည့်အလုပ်။ မြူးနစ် ၊စုန်းမ၊မှော်ဆရာ။ အဖြစ် မြင်နိုင်ပါသည်၊သင်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွေး။ ဖြစ်တဲ့အတွက်၊လွယ်ကူသောကြောင့်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အလုပ်၏အမျှောဖယ်ရှားပစ်ရန်အရာဝတ္ထု၏ရောဂါအခြေအနေ၊အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားပျက်၊ဆောင်၊တစ္သက္။အပြစ်၊ဖၚျ၊မှော်ဆရာ။ အပြစ်၊ဖၚျ၊မှော်ဆရာ။ အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း။ အစုန်းအတတ်စုန်းတွင်တစ်ရွာဖတ်ရှုဖို့လွယ်ကူပါတယ်လုပ်ပါ၊ပစ္စည်းများ ရောဂါအခြေအနေ၊အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားပျက်၊ဆောင်"ဆောင်"၊ပြစ်ဒဏ်။ အာဏာ၏ရိုးရာဓလေ့များ၏တောင်းဆိုမှု၊ငွေပေးချေလက်ဆောင်၊ငါပြုရန်ရှိသည်အလုပ်၏တယောငွေပမာဏ၏မှောင်မိုက်တန်ခိုး၊အုပ်။ ကိုယ့်အတိုင်းမျှောနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်နတ်ဆိုး၊ဒါကြောင့်အသက်ဝိညာဉ်ကိုအသေကောင်၏၊ဒါကြောင့်မည်သည့် ။ အားလုံးလူသိများနှင့်အမည်မသိစနစ်အကြှနျုပျ၏အရည်အချင်း။ လူ၏အကြံအစည်ဘာမှမလုပ်နိုင်။ တွေအများကြီးလည်းရှိ၏သောအစဉ်ခြေရာခံ။ ငါဖြစ်၏တစ်ဦးတိတ်ဆိတ်စွာဦးတည်ပြောင်းလဲအဖြစ်အပျက်။ အားဖြင့်လုပ်နေနှင့်ပေါင်းစပ်ငါ့လေ့ကျင့်ရေး၊မှော်လောကအတွက်။ သင်ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်၊ကျေးဇူးပြုအကြှနျုပျကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ လက်ခံငွေနှင့်လက်ဆောင်လာအဲ့မှော်လုပ်။ သင်၏ခရီးမှာရှာ၏သားသမီး ၄၅ အသက်အနှစ်အောက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအသက်ရှင်နေထိုင်လိုသူအမြဲတမ်းအတွက်မြူးနစ်မကျော် ၅၀အသက်အနှစ်၊ဒါပေမယ့်လည်းအပေါ်အားကစားသဘောမျိုးဟာသ၊ဝါသနာနဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ဘဝအသက်တာအနက်ဆက်ဆံရေး၊သင်လှုပ်ရှားမှနွေးထွေးခြင်းနှင့်နှစ်သိမ့်သင်၏စာရေးဆရာကိုအခြားအဓိကမြို့ကြီး။ခရီးအကြာအတွက်နေရာရှာ၏အမျိုးသားကျော် ၅၀ အသက်အနှစ်ကနေအဆက်မပြတ် မြူးနစ်အမျိုးသမီးတွေကိုအောက် ၄၅ သူမှာအကောင်းဝါသနာနည်းလမ်း၏အားကစားသဘောမျိုးနဲ့ဟာသကိုခံစား၊အောက်ကလေး ၄၅ စေ ပူနွေးနှင့်ဆက်ဆံရေးနွေးထွေးအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်ဗင်အိမ်မှာရ-အွန်လိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဘိဥာဏ် တိုက်ခိုက်ခြင်း:လူတစ်ယောက်သည်ရှိရမယ်လက်တွေ့ကျတဲ့အတွေ့အကြုံအတွက်ဤနယ်ပယ်တွင်။ ရိုးရာဓဒင်ဟော၊နိမိတ်။ မိသားစုကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏။ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အားယား၊ငါ့အချစ်။ ဖုန္းေခၚမည္သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုရေးသား။ ဥာဏ်၏တိုက်ခိုက် ။ နှင့်အတူလူတစ်ဦးနှင့်အတူလက်တွေ့ကျတဲ့အတွေ့အကြုံ။ ရိုးရာဓဒင်ဟော၊နိမိတ်။ မေတ္တာမိသားစု။ ဂရုတစိုက်စစ်ဆေးသည်ယား၊ငါ့အချစ်။ ဖုန္းေခၚမည္သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုရေးသား။ ကနေတဲ့လူတစ်ယောက်လိုသူကောင်းစွာတုံ့ပြန်ဖို့ဆောက်လုပ်ရေး၏လယ်ပြင်နေ့ ၅၇ နှစ်၏လှပသောအမျိုးသမီး ၅၅-၆၅ နှစ်၏ဂျာမနီနဲ့သြစတြီးယား။ သေချာ။ သင်မည်။ ရက်ရက်ရောရောစု။ ငါသည်လည်းဖြေချင်များဆောက်လုပ်ခြင်း၊အားကစားအစည်းအဝေးလှဂျာမန်အမျိုးသမီး ၅၇ နှစ်အရွယ်နှင့်အမျိုးသားများ ၅၅-၆၅ အသက်အနှစ်-ဂျာမနီနဲ့သြစတြီးယား။ ငါကူညီပျော်ရွှင်လိမ့်မည်သင်ရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းပြီးဂရုတစိုက်စဉ်းစားပါ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာများအတွက်သင့်မိသားစု၊အလုပ်၊စသည်တို့ကို။ အကွာအဝေး၊ပျက်စီးမှု၊မျက်စိအဘို့မကောင်းသောအ။ ဖွင့်လို့ရတဲ့လမ္း၊ခံေပ်ာက္အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ချက်ပြုတ်ကနေပြဿနာတွေဖြေရှင်းရေး၊အညစ်အပြန်အချစ်မှော်၏အထွေထွေအဖြေ"မျက်စိ၊ခင်ပွန်းသည်က၊ဖယ်ရှား၊အနတ်ဆိုးသည်ဘုရားသခင်၏မေတ္တာ၊ကွယ်မှမှော်မှော်-သင်ကူညီလိမ့်မည်ရွင္း၊မိသားစု၊အလုပ်၊ပျက်၊ချစ်၏မျက်စိဆိုးသေချာစွာစုံစမ်း"။ ဖွင့်လှစ်လမ္း၊စင်ကြယ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု။ သိမ်းချက်ပြုတ်မှပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း၊ခပ်ပြန်ချစ်မှော်အခုံဖြေရှင်းနည်းများကျွန်မခင်ပွန်းရဲ့"မျက်စိ"၊ကိုဖယ်ရှားငါ့ပြိုင်ဘက်၊နတ်ဆိုးဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုကာကွယ်မှော်မှော်။.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြီးဖျက်ဆီးဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထပ္ဘဲေဆက်ဆံရေးနှင့်ချမ်းသာကြွယ်နှင့်အတူအပျို၏။ ဒါဟာဝဘ်ဆိုဒ်ဖန်တီးခဲ့အကူအညီတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတူတကွနေထိုင်နေနှင့်ကောင်းစွာ-ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူမြို့၏ကမ္ဘာ့။ ငါပြောငှါရှက်ကြောက်မိပါတယ်သောမိဘတစ်ဦးရှိသည်၊ငါသည်ကိုယ်အပြုအမူ၊အစဉ်မပြတ်ငါတစ်ကောင်းတဲ့ဘဝအသက်တာအပြည့်အဝတည်ရှိဖို့။
မင်္ဂလာပါ၊ငါသည်လည်းရချင်လက်တွေ့ကျတဲ့အဖြေများအတွက်အမျိုးသမီးနှင့်မိသားစုများမှ ဒေသရောနှင့်အတူအုပ်စုနှစ်စု၏မသန်စွမ်းလူများအသက် ၃၈ သည်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အတူအကြှနျုပျအဘ။ တူလှပါတယ်ကားအဘယ်သို့ရှိသည်တိတ်ဆိတ်စွာနားထောင်ဖို့အသံတူ။ အစားအစာအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေး။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ဒါဟာထီမဲ့အိမ်သင်မေးမြန်းသင့်ပါတယ်၊နှင့်အချည်းနှီး။ မသိဘူး။။လျှပ်စစ်နှင့်တူလောင်။ နှင့်အမြဲပိုမိုလွယ်ကူင့်။ စစ်တွေမြို့အလယ်၌ဟစ်။ ငါ့နှလုံး၌။ သင့်လျော်သော။ များအတွက်များစွာအထီးကျန်ဆန်ဝိညာဉ်လောကအတွက်၊ကိုယ့်ဘာမှမထိခိုက်ဘူး၊ကျေးဇူးပြု။ ငါကူညီပျော်ရွှင်၊လွန်း။ ဘယ်လိုဘုရားသခင်နှင့်အတူမျှဝေ။ ဖုန္းေခၚမည္။ ငါရယ်စရာကလေးမလေး။ ငါတိုင်းပြည်အအားလပ်ရက်အပေါ်။ငါအားကစားလုပ်ဖို့၊ငါ၏အအားနည်းခြင်းအရသာအလုပ်။.
ယုံကြည်ခြင်းအတွက်အပြန်အလှန်နားလည်နေထွက်မီနာမငြိမ်၊ဟာသ၊မတ်လအချစ်ဇာတ်လမ်း၏၊သစ္စာအသီးအသီးအခြားကုမ္ပဏီနှင့်အပူချိန်ဟာနေ့တိုင်း။ ဒါကြောင့်ဖြစ်သင့်သည်အဖြစ်ခံစားခဲ့ရသည်။ တစ်လှပတဲ့အိပ်မက်စောင့်မျှော်နေပါတယ်၊သင်ပင်လျှင်တစ်အားလပ်ရက်။ ထုတ်ပြန်ည့်သန်းပေါင်းများစွာသောအသုံးပြုသူများအဘို့အရှာကြသည်၊နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့၊ဒါဟာငါ့အမြန်နှုန်း။။ ဒီမှတ်တမ်းကဘယ်လိုဆက်လက်အလုပ်လုပ်ကိုင်အပေါ်လယ်ပြင်အဘို့မိန်းကလေးများအတွက် ဒေသ။ နှင့်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဆွဲဆောင်မှုပရိုဖိုင်း။ အဲဒီ၏၊မိန်းကလေးများသည်အဆင်းသဏ္ဌာန်၌ဆွဲဆောင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်း။
ဟန်ဂေချောကလက်ကိတ်မုန့်နှင့်အချိုပွဲစပျစ်ရည်ကို၏အစိုဓာတ်ကို-သက်သေအထောက်စက္ကူဒီနှင့်အညီ၊သင်တန်း၊ေဖၚျ။ အမည်၏အသက်ကိုမီးဇာတ်ကောင်လူကို၊မိမိအအမြင့်ဝိညာဉ်၊မိမိရင်ခုန်စရာရိုက်။ သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တစ်စုံတစ်ဦးချိန်းတွေ့၊သင်သည်လက်ျာအရပ်ဌာန၌ဖွင့်။ ပွဲတော်များ၊ဂီတ၊ကခုန်ခြင်း၊အသစ်ဝိုင်နှင့်ဖျော်ဖြေရေးအချို့စုစည်းပြီးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း။ ၎င်းကျပန်းရင်ဆိုင်ကြသည်များအတွက်သင့်လျော်သောကြီးမြင့်သောမေတ္တာနှင့်တက်ကြွဖြစ်။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပရိုဖိုင်၊၊ချိုသည်လူတစ်ဦး၊ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဘယ်သူသည်အစဉ်အမြဲစတင်သည်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အလုပ်အမြန်။
အထိ ၂၀၂၀၊ထိုနှစ်တွင်၏အထောက်အပံ့ကောင်း၊ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါချစ်လူ၊သဘာဝ၊နှင့်တိရိစ္ဆာန်များ။ ငါအနုပညာကို၊ရုပ်ရှင်ရုံနှင့်ဂီတ။ ဆောင်တတ်၏ရယ်မောနှင့်အတူ။ ကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ကျွန်မအဘို့အသက်တာ၏လူ၊သဘာဝ၊အနုပညာနှင့်အများကြီးပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့၊သောသူတို့အ။ ငါမွေးဖွားခဲ့သည်။ ကျန်းမာတဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့။ ကျေးဇူးအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောအဝတ်အစတိုင်များ၊အလယ်တန်းကျောင်းနှင့်အထက်တန်းကျောင်း၊ရင်းနှီး၊အလွန်ကြီးစွာသောနှင့်အတူဆက်ဆံရေး။
လှပသောမိန်းကလေးတစ်ဦးပျောက်ဆုံးသည်အထိ ၂၀ ညတ်၊တပြင်လုံးကိုအသက်တာသည်ရန်အလွန်ရယ်စရာဇာတ်ကောင်ဆုပ်ရွံ ၂၀-တစ်ဦးကျော်ကြားရေခဲမုန့်စက်ရုံတွင်မောင်ဗြိတိန်အဘယ်မှာရှိအဓိကခံစားရမပြည့်စုံသောအသက်အဘို့အခံစားရလွန်ရယ်စရာ။ အဆိုပါစက်ရုံသည်ထူးဆန်းတဲ့နေရာ၊သင်ကြိုးစားနိုင်ပါရေခဲမုန့်၊ဥပမာအားဖြင့်၊တစ်ဦးပြတိုက်၊အသာန်-။ အတိုင်အရေးအသား၏အပေါ် ကီလိုပစ်ခတ်မှုအမျိုးမျိုးသောရေခဲမုန့် ၊ဖန်တီးဟာသပုံ။ စိတ်ကူးအမာမ္ပခဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်မှရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူအဘယ်အရာခဲ့ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများလည်းအမျိုးမျိုးရှိရေခဲမုန့်၊ဒါကြောင့်သင်ရှိပါက၊ဒါကြောင့်သင့်အတွက်သွန်းလောင်းချိန်အတိုတောင်းတဲ့ကာလ။ ဤအရပ်သည်အနီးကပ်မှ ချောက်ဂျုံနှင့်အတူသူတို့ထဲကအများစုဟာမြို့။ ဒါဟာသကဲ့သို့လူကြိုက်များမဟုတ်ပါဘူးအကျယ်ချောက်၊ဒါပေမယ့်လျော့နည်းရေပန်းစားကို။ အချောက်အပြောင်းအလဲမှပုံမှန်မဟုတ်သောအရောင်မှသဲအနီရောင်၊အနီနှင့်အတူ၊အဂျုံသည်။ တကယ်တော့။။။၊လပေါင်းများစွာ။ နှစ်ဦးစလုံးအရာဆိုလိုနက်အက်ကွဲ။ ဖွဲ့စည်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်သဲ၊ထိုသို့လူသိများခဲ့ပြီးရာပေါင်းများစွာများအတွက်အနှစ်။ အစာရှောင်ခြင်းအမိုးနဲ့လေပေးထူးဆန်းပုံစံမျိုးမဆိုအမှတ်တရပင်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းထူးဆန်းရောင်စုံလပေါင်းများစွာ။ ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားကြောင်း၏နံရံပေါ်မှာအလႊာမ်ား၏ဖွဲ့စည်းပုံတွင်လပေါင်းများစွာ၊ကျနော်တို့ပေးနိုင်ဖို့အလျင်အမြန်နှင့်အလျင်အမြန်စုစည်းပြီးအောက်ရေ။ အဲနေကြတယ်လိုင်းများနှင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာခွင့်ပြုကြောင်းရေနုတ်မြောင်းဖြစ်နှေးကွေး။ အထက်ချောက်ဂျုံဟုခေါ်သည်အထက်ချောက်ဂျုံဖြင့်အင်္ဂယ။ အသြယ္ေသည်ဥာဏ္ၾအဝင်ဝမှာချောက်နှင့်မလိုအပ်ပါဘူးဤအစိတ်အပိုင်း၎င်း၏တစ်ခုလုံးကိုအရှည်အဖြစ်ရှုမြင်သုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့်မြေပြင်၏ကြီးမားသောအရေခရီး၊ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အချောက်အထက်ဖွင့်ပွဲကိုအောက်ရော်လ်လိုင်းငျး။ ချောက်ဂျုံ-အကြောင်း-ကီချောက် အထက်ဂျုံ၊ဟားဟားနီးပတ်ရစ်ကြက်၊အနိမ့်ဖၚျချောက်ကမ်းပါး။ အခါငါသည်လည်းလာရှူး ချောက်သင်တန်းနှင့်သတ္တုတပ်ဆင်ခြင်းကြောင့်အစိတ်အပိုင်းများ၏အထက်နဲ့အောက်ကြိုးနှင့်အလွန်အန္တရာယ်များသောရှူး ကြိုးလမ်းကြောင်း။ ပင်တပ်ဆင်ပြီးနောက်လှေ၊ချောက်ဂျုံခရီးချောက်ခရီးသည်တော်တော်အများကြီးခက်ခဲပါတယ်။ လူတိုင်းကိုအိပ်မက်၊အိပ်မက်မက်သည်၊ငါစဉ်းစား။ အဘယ်ကြောင့်.
အလှအပအတွက်အမေရိကန်နှင့်ဥရောပနှင့်မတူ၊သြစတြေးလျအတွက်၊ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရူးပဲရောက်ရှိ၎င်း၏အထွတ်အထိပ်။ သင်မွေ့လျော်နိုင်ပါလိမ့်မည်ဒီတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်သြစတြေးလျအမျိုးသားများအဖို့သူတို့ကို။ အတည်ပြုပြီးနောက်အတိုင်း၊ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်အဆိုပါသတို့သမီးရဲ့အကြီးဆုံးသြစတြေးလျ-ရုရှ။ မှတ်ချက်:လာ၊ေပရိုဖိုင်းနှင့်အရည်အသွေးကိုအသင်းတော်ဘုရားရှိခိုးနှင့်ဖို့မေ့လျော့ကြပါဘူးလိုအပ်ကြောင်းပြောဒီဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသော။ ပယ်ဖျက်ဖို့အပရိုဖိုင်၊သင်ရနိုင်မှမော်ကွန်းတိုက်အပေါ် ၀၁။၀၉။၂၀၁၂။ ရှိပါတယ်လျှင်အဘယ်သူမျှမအမှားများအတွက်ဗီဇာလျှောက်လွှာ၊ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ်အသြစတြေးလျသံရုံးနှင့်မှတ်ပုံတင်လူဝင္မႈကိုယ်စားလှယ် ၁၄၆၀၈၂၀အတွက်သတို့သမီးများသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးဗီဇာနှင့်အခြားဗီဇာ။
လေးနက်သောဆက်ဆံရေးကို၊လက်ထပ်ထိမ်းမြား၊ချစ်ရက္မ်ား၊မင်၊ပရောမရှိဘဲချစ်ကြည်ညီညွှတ်ရေး။ ဒါကြောင့်ဒီအဘို့မေးခွန်းင်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း-မှတ်တမ်းတွင်၊မှတ်ပုံတင်သွားရန်ဆိုဒ်စတင်လွှင့်တင်သင့်ပရိုဖိုင်းဖန်တီးရန်အခြားလူမှုကွန်ယက်ကို။ ကျနော်တို့အပြည့်အဝကာကွယ်ထားသည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်။ သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်သတင်းအချက်အမည်တွင်တည်ရှိက္ျ၊ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမလျှင်ပင်အပြည့်အဝအာမခံချက်၊ျဖစ္ပါသည္။ အလွယ်တကူထွက်ရှာတွေ့။ ကျနော်တို့များကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးလိုအပ်သည့်ကိရိယာများနှင့်ကိရိယာများအတွက်အသုံးပြုသူများမှရရန်စတင်။ အဲလည်းမိုဘိုင်းဗားရှင်းဆိုက်၏အကြောင်းအမြဲလိုက်ပါ။ အဘို့အတက်လက်မှတ်ထိုးမေတ္တာဇာတ်လမ်းအဖြစ်အပျက်မပါဘဲဖြစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ စိတ်ဝင်စား:ဆန်တာဖေး-၊၊။ ၊၊၊ အသစ်ကိုမိတ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာရုရှား၊အားလုံးမြို့ကမ္ဘာ၏။
-ဤသည်အသစ်ကမ်းခြေအဖော်အတွက်ဟယ်၊လူတစ်ဦးအတွက်နှင့်ဖင်လန်အတွက်ဖြေလျော့ခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့။ သင်စရာမလိုသို့ငုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးစားသောက်ဆိုင်များအတွက်၏ငါးဇွန်း။ ဤတစ်မြို့ဖြစ်၏။ လည်းလူသိများ၎င်း၏အမျိုးမျိုးသောအားလပ်ရက်ပူဇော်သက္ကာ၊ဒါပေမယ့်သာဒီနိုငျသောအရသာနှင့်အကြောင်းပြောဆိုဒေသ၏မာနထောင်လွှား-အနက္ေရာင္သွေးဝက်အူချောင်း။ ၊မြောက်ပိုင်းဖင်လန်နိုင်ငံဖစ္လာတဲ့အလှ။။။။ မမေ့နိုင်သောအချစ်၊အလင်းအိမ်၏မြောက်စေနိုင်ကြောင်းသင်ပျော်ရွှင်ပြီးအဘယ်မှာရှိသင်သွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။ ရှိမရှိသင်အတွက်အသက်ရှင်ဖင်လန်နိုင်ငံသို့မဟုတ်မဟုတ်၊ဒီနေရာမှာပြောဖို့၊ပျော်စရာရှိသည်နှင့်အတူနှာအသစ်အွန်လိုင်းအသိအကျွမ်းအဝင်နေ့စဉ်ရော။ အဖြစ်အပျက်အကိုင်ထက်ပို။၁၀၀။၀၀၀ လူများနှင့်အစဉ်အမြဲတွေအများကြီးဒေသခံမိန်းကလေးငယ်များ၊ဒါပေမယ့်ဒီအအတိအကျအရာကိုမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်လုပ်ဖို့လိုအပ်မှာနှစ်စဉ်ဒီအချိန်။
အတိုင်ပင်ခံရှေ့နေ ဥပဒေရေးရာအကြံပေးခြင်း၊ဝန်ထမ်းများ၊ရှေ့နေ(ဥပဒေရေးရာအကြံပေး)၊ထက်ပိုပြီး ၅၀ သောအချိန်တိုင်ပင်အခြားဝန်ထမ်းသို့မဟုတ်၏တည်ထောင်သူအဖွဲ့အစည်းအပေါ်အမျိုးမျိုးသောဥပဒေကြောင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဖြစ်ပေါ်နှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူ(သို)၏န်ထမ်းသို့မဟုတ်၏တည်ထောင်သူအဖွဲ့အစည်းများ၊နှင့်အခြားလူပုဂ္ဂိုလ်များ။ အဆိုပါဥပဒေရေးရာအကြံပေးသေချာလိုက်နာမှုဥပဒေ-နှစ်ဦးစလုံးအဖွဲ့အစည်းနှင့်ဆန့်ကျင်သောအဖွဲ့အစည်းအားဖြင့်အခြားသင်တန်းသားများ၏တရားဝင်အမည်ဖြစ်သည်။ အကြားပေါင်းစပ်သောသူတို့၏အယူအဆ"ရှေ့နေ၊"ထုတ္မေျ၊သင်တန်း၏၊ထားသောအထူးရာအရပျ။ အများဆုံးရှေ့နေများအတွက်အလုပ်လုပ်-လံုးခ်င္းအိမ္နိုင္မဲအတွက်အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်း။ အကြားအကြံပေးကြသည်အရပျ၊အကြီးတန်းအရပျ၊အကြံပေး၊အထွေထွေအကြံပေး။ ပိုကြီးအဖွဲ့အစည်းတွင်ပြည်နယ်အရာထက်ပိုပြီး ၁၀ ရှေ့နေ၊ဥပဒေရေးရာအကြံပေးအခြေခံအမျိုးအစား(အသေးငယ်ဆုံးမှအကြီးဆုံး):ဥပဒေရေးရာအကြံပေး၊ဥပဒေရေးရာအကြံပေးဖို့ဒုတိယအမျိုးအစား၊ဥပဒေရေးရာအကြံပေး၏ပထမဦးဆုံးအမျိုးအစား၊အကြီးတန်းဥပဒေရေးရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်၊ဌာန၊ဦးခေါင်း၏ဥပဒေရေးရာနဲ့ဌာန အဆိုအရအရည်အချင်းများပို့စ်များ၏ဦးခေါင်း၊ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အခြားသောဝန်ထမ်းများ၊တီထွင်တက္ကသိုလ်ကအလုပ်သမားနှင့်အဖွဲ့ကအတည်ပြု။ အၾကံေသို့ခွဲခြားအောက်ပါအမျိုးအဆိုမှအတွေ့အကြုံနှင့်ပညာရေး:ဥပဒေရေးရာအကြံပေး၊အမျိုးအစား:မြင့်မားပရော်ဖက်ရှင်နယ်(ဥပဒေရေးရာ)ပညာရေးနှင့်အလုပ်အတွေ့အကြုံအတွက်အနေအထား၏ဥပဒေရေးရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်၏ဒုတိယအမျိုးအစားထက်မနည်း ၃ႏွစ္။ ဥပဒေရေးရာအကြံပေးအမျိုးအစား:မြင့်မားပရော်ဖက်ရှင်နယ်(ဥပဒေရေးရာ)ပညာရေးနှင့်အလုပ်အတွေ့အကြုံအဖြစ်သာလံုးခ်င္းအိမ္ရှေ့နေသို့မဟုတ်အခြားရာထူးအစားထိုးအထူးကုနှင့်အတူမြင့်မားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပညာရေးနဲ့ထက်မနည်း ၃ႏွစ္။ ထုတ္မေျ:မြင့်မားပရော်ဖက်ရှင်နယ်(ဥပဒေရေးရာ)ခြင်းမရှိဘဲပညာရေး၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အတွေ့အကြုံသို့မဟုတ်အလယ်တန်း(ဥပဒေရေးရာ)ပညာရေးနှင့်အလုပ်အတွေ့အကြုံကိုအတွက်ပို့စ်များအပြည့်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများကအလယ်တန်းနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပညာရေး၊အထက်မနည်းသည် ၅ နှစ်ပေါင်း
ပြားရှိနေကြသည်မဟုတ်ဘျဂျပန်နိုင်ငံတွင်စတင်နှင့်အတူ-သင်မမြင်နိုင်ပါဘူး၊အများစုကစကားသံကိုချက်တင်၊သင်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုစကား။။။။။ ဒီတော့ကျွန်မအထင်ဂျပန်ဗားရှင်းဖို့ခက်လိမ့်မည်။ ဘျဂျပန်မှာမဟုတ်ကြောင်းကြီးမားနှင့်အတူစတင်-သင်မမြင်နိုင်ပါဘူး၊အများစုကစကားသံကိုချက်တင်၊သင်ခွင့်ပြုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောပြရန်။ ဒီတော့ကျွန်မအထင်ဂျပန်ဗားရှင်းဖြစ်အောင်မြင်ရန်ခက်ခဲ။ အဖြစ်အ ၊အရမ်းရယ်ရတယ်။ သင်အမှန်တကယ်ဤအရပ်?"ဒါဟာစက်ဆုပ်ရွံ့ရှာဘွယ်အရာကိုလူပြုပါ။ ချင်သောကြောင့်ရန်ဗားရှင်း၊ဒီနေရာမှာငါတွေ့သောတရုတ်ဗားရှင်း ၊ငါပြောရန်ဆိုဒ်စီမံခန့်ခွဲသူ၊နှင့်မကြာမီအမည်ဖြစ်၏အဓိကဂျပန်နှင့်ကိုးရီးယားဗားရှင်း၊ကျနော်ထင်ဂျပန်အမည်အချစ်၏ဤအမျိုးကိုအာရှ၏ဗားရှင်း တကယ်တော့၊ကျွန်ုပ်တို့၏အာရှအမျိုးသမီးအတော်လေးမူပိုင်ခွင့်နှင့်ယဉ်ကျေးမှနိုင်ငံခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ဒါကြောင့်အများကြီးလျော့နည်းဖွစျလိမျ့မညျလိမ်နှင့်အရူး။ ကလေးတွေကိုငါ ကြသည် ၊ဖြတ်သို့မဟုတ်ဆွဲ၊အားလုံးအပေါ်အဆိုပါမြေပုံတွင်ကားများနှင့်အတူအနည်းငယ်လူများအတွက်ခရိုဝေ့ဖ်။
သိမှရသင့်သင်္ဘောကို။။။မလုပ်ပါနှင့်၊လေးလေးနက်နက်။ ထိုသို့ပြု။ -ကြို
အဖြစ်ဆိုးဖမ်း လေယာဉ်မှူး၊သင်လိုအပ်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့သင်၏သင်္ဘောသည်ရုံသာမကသင့်ရဲ့အပူအစုံအာကာသဘီး။။။၏ဒုတိယသား။ အချိန်ယူလေ့လာပြီးမှအသေးစိတ်အတွက်စနစ်တကျကြိုတင်ပြင်ဆင်အရာကိုရှေ့ဆက်တည်ရှိသည်၊သို့မဟုတ်အခြားသင်ရှို့ရန်သွားကြသည်။ ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အကြို: သင်ဖြစ်နိုင်ကိုမီးရှို့၊ပြီးတော့အေးခဲပြီးတော့သေဆုံး။ ထိုအခါအားလုံးသုံးထပ်။။။အကြိမ်ကြိမ်။ မအကောင်းဆုံးရလဒ်။ သင်သိသင့်သင်္ဘောရဲ့ကိရိယာနှင့်အချက်အလက်ဒါကြောင့်အဆက်မပြတ်သင်ကျွေးမွေး၊အပိုပြီးဖွယ်ရှိသင်အသက်ရှင်ရပ်တည်ရန်။ ဤသည်သင့်ဘဝထောက်ခံမှုယူနစ်နှင့်ရှိသမျှသောအပိုင်းသင်အအေးမှ၊လွှတ်ပြယ်၏နက်ရှိုင်းသောအာကာသ။ ဒါဟာရှိသမျှကိုတူရိယာများနှင့် ဝစ်ဂျက်သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အလုပ်အဖြစ် လေယာဉ်မှူး၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးကြည့်ကြရအောင်။ အဒေါင်လိုက်ဘားဘယ်ဘက်ထိပ်။ ဒါဟာအဓိ၏အခွံ၊သို့မဟုတ်သံချပ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့မယ်တော့မှန်းလိုက်အနိမ့်၊အချိန်ရဲ့အပူ-ခြေလျင်ထွက်အရပ်၌ပုန်းထွက်၊သို့မဟုတ်ခေါ်ဆိုခအချို့ပျောက်စေနိုင်သောတစ်ဦးထံမှထောက်ခံမှုယာဉ်။ နှင့်ဒေါင်လိုက်ဘားညာဘက်ထိပ်သည်သင်၏ဒိုင်းလွှားကိုအဆင့်အတန်း။ သင်၏ဒိုင်းကာကွယ်ရေးသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးလိုင်းကို။ အဖြစ်အသစ်သင်္ဘောများနှင့်တင်ပို့အတန်း၊သင်သတိပြုမိလိမ့်မည်ဘယ်လောက်သူတို့ကွဲပြားခြားနား၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဒိုင်းနှင့်သံချပ်။ မိုးသည်းထန်စွာအဆင့်မီသင်္ဘောများ၊ဥပမာအားဖြင့်၊ဖြစ်ကောင်းသံချပ်ယူ၏အန္တရာယ်ကိုရပ်၌ထိုင်နှင့်စိမ်တက်ရန်သူ၏စွမ်းအား။ သင်၏မျက်စိစောင့်ရှောက်အပေါ်သတိထားပါ။ ဒီနေရာလေးနည်းနည်းဂျော်ပေးသည်သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အမြင်အာရုံစိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်။ အပြာရောင်အမှတ်အသားများမှာမင်၊လိမ္မော်ရောင်အမှတ်အသားများမှာရန်သူ၊အဝါရောင်အမှတ်အသားများမှာဒုံးကျည်နှင့်တော့။ အရာဝတ္ထု၊၊ရန်သူအပေါ်ဒါပေါ်လာအဖြစ် ညွှန်ပြ၏ညှနျကွားသောအရာဝတ္ထု။ ဒါ့လျှင်ရန်သူရှိပါတယ်လျာထားသောသင်သို့မဟုတ်သ အတွက်အချွန်ဧနောက်၊သူတို့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ပိုပြီးထင်ရှားပေါ်အဆိုပါရေဒါ။ ဒုံးကျည်များကိုတစုံတယောက်မျှအချိန်တွင်၊အဆိုပါစစ်ပွဲဇုန်ဖြစ်လိမ့်မည် နှင့်အတူရမှတ်များ။ သာအဆိုပါဒုံးကျည်ကိုပစ်မှတ်ထားလိမ့်မည်အပေါ်ပြသ ၊ရှင်းလင်းပြတ်သားဆောင်ခဲ့မှပရမ်းပတာ။ မင်ယခုပေါ်မှာပေါ်လာဒါအောက်တွင်အချို့သောအခြေအနေ။ သူတို့ပိုသိေတပ်လှန့်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေရန်အထောက်အကူသို့မဟုတ်အုပ်စုတက်ပါလိမ့်မယ်၊နှင့်သင်သူတို့ကိုမြင်(အမြင်ဒီမှာအပြာရောင်)။ နေတယ်ဆိုရင်ပျံသန်းနေတဲ့သင်္ဘောကိုအတူအနာရောဂါငြိမ်းစရာစွမ်းရည်၊အားလုံးမင်မြင်နိုင်ဖြစ်ရလိမ့်မည်သည္။ ဒါကောင်းမွန်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်၊ဒါပေမယ့်မသိပ်အပေါ်မှီခို။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊ဒီ -အားဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်နည်းလမ်းများအချက်မှာဒါတစ်ချိန်ကနေစဉ်၌ကြည့်ဖို့ဘယ်လောက်အလုပ်များလာပြီထွက်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်၊ဒါပေမယ့်သင်သည်လိမ့်မယ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ချင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြင်ဘက်သင့်ရဲ့လေယာဉ်များအတွက်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်း။ ကြည့်မှာအဝါရောင်ထပ္တိုးအရက်ဆိုင်ပေါ်အောက်ခြေလက်ဝဲဘက်နှင့်ညာဘက်သင့်ရဲ့လေယာဉ်။ ဤညွှန်ကိန်းနှစ်ခုခွဲမရအောင်ပူးတွဲနေပါတယ်။ အ လက်ဝဲဘက်အပေါ်သင်မည်သို့ပြသအများကြီးသိမ်းဆည်းထားသည့်စွမ်းအင်ရှိသည်နေစဉ်၊အလျင် ညွှန်ပြချက်ကိုလက်ျာအပေါ်ပြသဘယ်လောက်မြန်မြန်သင်တာပေါ့။ အပိုထပ်တိုးခန့်၊သင်ပျက်ဆီး ။ အတွက်အလင်း၏ဤ၊ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှု၏တိုးတက်မှုအတွက်တိုတောင်းပေါက်ကွဲထက်အဆက်မပြတ်ဆုံ။ တကယ်တော့၊ဒီအအတိအကျအကြံပေးချက်ကိုသင်ရလိမ့်မယ်ထံမှအတွေ့အကြုံလေယာဉ်မှူးကြောင့်သုံးတိုတောင်းပေါက်ကွဲ၏တိုးတက်မှုနှင့်အတူဒွန်ကျပန်းပြောင်းလဲမှု၏ဦးတည်ချက်ကိုအဆုံးထိရောက်လမ်းအဘေးကင်းလုံခြုံတည်းခိုသည့်အခါလိုက်။ ဒီဘာင္ကြက္အခ်က္အလက္မ်ားျပမ်က္ႏွာျပင္သင့်ရဲ့ဘယ်ဖက်မှမဟုတ်အမြဲတမ်းအတိအကျကဤပုံဖြစ်သတင်းအချက်အလက်ပါဝင်မည်ပြောင်းသည်နှင့်အညီသင့်ရဲ့အခြေအနေ။ ဒီမှာပြနေတာကအဆင့်အတန်းများသုံးထိန်းချုပ်မှုအချက်များ၊၏အရေအတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့၏ကျန်ရှိသောအဘို့အသီးအသီးအဖွဲ့များ၊နှင့်အချိန်ကာလတွင်ကျန်ရှိနေသောပွဲ။ ထိန်းချုပ်မှုအချက်များကိုထိန်းချုပ်မှုအတွက်မီးခြစ်၊ဒီဘာင္ကြက္လည်းသင်ပြအခြေအနေ၏ထိန်းချုပ်မှုအချက်များသင့်ရဲ့အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးဖို့။ လျှင်ထိုအချက်များကိုအရောင်ဖြူဖြစ်ကြပြီး၊ထို့နောက်သူတယောက်မျှမရှိ။ အခါမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များမှာတပ်ဆင်ထား၊သင်မြင်ရပါလိမ့်မည်စက်ဝိုင်းလှည့်ပတ်ညွှန်တဖြည်းဖြည်းဖြည့်စွက်အတွက်အရောင် အတားအမှတ်လျက်ရှိ၏လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ဖမ်းမိ။ အရောင်၏အထိန္းအချက်ညွှန်ပြောင်းလဲလာလိမ့်မည်ဟုလုံးဝအခါထိုအချက်ဖမ်းမိဖြစ်ပါတယ်၊အပေါင်းအနည်းငယ်ကွန်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပြသောအဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ ကြည့်လိုက်ရင်ပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက်၊သင်ရှိတယ်လို့မြင်နိုင်ရေထိန်းချုပ်ရေးအချက်အညွှန်းကိန်းများလျှင်ဒါကြောင့်သင်မြင်သည်အထူးသဖြင့်ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်လက်အောက်တွင်၊သင်အပြေးပြိုင်ပွဲကျော်ရှိပါတယ်ထဲကယူမှရန်သူကိုအမောင်းသူနှင့်ခုႏွစ္ထိ။ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောချေမှုန်းရေးမြေပုံအတွင်းလေယာဉ်တင်သင်္ဘောချေမှုန်းရေးအပြောင်းတာနဲ့ထိန်းချုပ်အမှတ်ခဲ့ကြလုံခြုံနှင့်ဒိုင်းဆင်း၊အတားအချက်အိုင္ကြန္မ်ားပျောက်ကွယ်သွားမည်အားဖြင့်အစားထိုးအတုပုံရိပ်များ၊လေယာဉ်တင်သင်္ဘော။ သင်သတိပြုမိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မှတ်သားထားသည်နှင့်အတူအဖြူအစက်။ ဤအကြွင်းအကျန်အအေးဆုံ-ဒီမယုံနိုင်လောက်အောင်အသုံးဝင်သောအဖြစ်အမှတ်သူတို့ရဲ့အတိအကျတည်နေရာ၊အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးစောင့်ရှောက်ဖို့အဆင်ပြေဖို့ပတ်လည်၌သူတို့ကိုရှာတွေ့။ မျိုးစိတ် အပြာရောင်ဘားတန်းပြသသင်လက်ရှိအဆင့်အတန်းများ၏မျိုးစိတ်တြက္သာျသို့မဟုတ်ထည့်၊အခြားသောလမ်း၊ထိုပမာဏသည်ဘဝအသက်တာ၏သင့်ရဲ့အဖွဲ့များကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ လိမ္မော်ရောင် ဘားကငျြသူအသင်းရဲ့ကျန်ရှိနေ။ ရုံအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတစ်ခုညွှန်ပြချက်၏အချိန်။ အတွက်အဖွဲ့အသေခံကိုက်လျှင်၊အဆိုပါတိုက်ပွဲအဆုံးသတ်ပြီးသင်ဟာနည်းပါးလာရှိကျန်ရှိမႈမ်ားထက်သင်တို့၏ရန်သူ၊သင်ကဆုံးရှုံးရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်လျှင်ဤညွှန်ကိန်းများမှာဖေါ်ပြသင်မှာအားနည်းချက်၊ဒါကြောင့်အချိန်အထိသင့်ရဲ့ဂိမ်းအနည်းငယ်။ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကျန်းမာရေးအဖို့သီးသန့်အကြောင်းကစားသမားလေယာဉ်တင်သင်္ဘောချေမှုန်းရေးရိုက္ႏ၊ဤညွှန်ကိန်းသည်လုပ်ငန်းဆောင်တာမျိုးစုံ၊အရာတဖြစ်ပါသည်ဖြင့်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောရဲ့ကျန်ရှိသောကျန်းမာရေးအဖြစ်တွေ့မြင်ဒီမှာ။ ည့္ပါတိေဆန္းေလျင်မြန်မက်ဆေ့ခ်ျများအရာကြွင်းလေသင့်ရဲ့အဖွဲ့။ ပေါ်တွန်းချအဃ-ပ်ပွင့်ရောက်စေဖို့သတိပေးမီနူးကိုအသုံးပြုပါညာဘက်ကပ်ရွေးဖို့အလိုရှိသောအမည္၊ထို့နောက်လွှတ်ဃ-ပ်ပေးပို့ဖို့အမည္။ အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အကြားအချက်ပေး၊၏စာရင်းတစ်ခုမကြာသေးမီသတိပေးချက်လည်းဖြစ်ပုံပေါ်စာသား၏ညာဘက်အပေါ်လေယာဉ်။ အခုဆိုရင်သင်ပိုပြီးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးကျန်ရှိနေသောအဘို့အသင်အထိကပေါက်တက်၊သင်သည်သင်၏ဂိမ်းမျက်နှာပေါ်မှာနှင့်အဂသူရဲ့သူဌေးက။
ဥပဒေကြောင်းအရအပေါ်အကြံဥာဏ်အိမ္ရာကိစ္စများ ချစ်လှစွာသောမိတ်ဆွေများကိုသငျသညျမဆိုရှိပါကလိုအပ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခုခံကာကွယ်အိမ္ရာအခြင့္အေရးတဲ့အခါကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအလုပ်ရှေ့နေကအိမ္ရာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းလိမ့်မည်စတင်ရန်နှင့်အတူဥပဒေကြောင်းအရအပေါ်အကြံဥာဏ်အိမ္ရာကိစ္စရပ်များကိုလည်းရရှိနိုင်သည့်အရာနှစ်ခုလုံးအတွက်လူတစ်ဦးနှင့်အင်တာနက်ကနေတဆင့်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းကို။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ္ရာရှေ့နေများမှာလူသိများသောများအပြားမြို့များတွင်တိုင်းပြည်၏။ ရှေ့နေများအတွက်အိမ္ရာလိမ့်မည်အလွယ်တကူဖြေရှင်းသင့်နိုင်ငံနှင့်အတူစာရင်းသွင်းတရားရုံးကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုအတွက်အအိမ္ရာ၊ကိုခုခံကာကွယ်လိမ့်မည်ပိုင်ခွင့်များပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အထောက်အကူပေးပါလိမ့်မည်အတွက်များစွာသောအခြားလုပ်ငန်းများကိုဆက်စပ်အိမ္ရာနှင့်အိမ်ခြံမြေ။.
ဆယ်ကျော်သက် ရုပ်ရှင်ကိုချစ်ကြသည်မဟုတ်မသာစုံလင်သောအတွက်ရင်ခုန်စရာညဦးယံအချိန်နှင့်အတူရည်းစားသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ဒါပေမယ့်လည်းအများအတွက်မိုးရာသီကာလအနားယူရန်။ သူတို့ကအများအားဖြင့်ရယ်စရာနှင့်ကြည်နူးစရာ။ အဓိကဇာတ်ကောင်အတွက်ဒီရုပ်ရှင်ဂျိမ်းစ်ကင်မရွန်၊အဘယ်သူသည်အသစ်တစ်ခုကိုကျောင်းဟုခေါ် ။ ဟိုမှာ၊သူသိသစ္ကို သိနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျရောက်။ သစ္ကိုသုံးဖြုန်းဖို့ရှိပါတယ်နှင့်အတူသူမ၏မိတ်ဆွေအကြောင်းကိုဒီဇိုင်နာအဝတ်နှင့်သာရှိမျက်စိများအတွက်မရမ်းအသိဉာဏ်ဒါပေမယ့်အကောင်း-ရှာနေဂျိုချုန်း။ နောက်ထပ်၊ထိုမိဖုရားသည်အလှဆုံးရုပ်ရှင်များကိုချစ်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း။ ဆွဲငင် ။ ကိုတော်တော်လေးဆံပင်ရွှေရောင်နားလည်ရန်လွယ်ကူသောကြောင့်ဖွင့်အဝယ္စင္တာမ်ား၏ကျုပ်ဒေဖို့သင်-ဒါကြောင့်လည်းထူးခြားတဲ့နှင့်အတူအချစ်ဝတ္ထု'ဖူးကိုနမ်းဟုအဆိုပါလူငယ် ကြုံတွေ့နေရသည်လေယာဉ်ကိုအခြား:ခဲလှ၏အကြောင်းတစ်အားကစားချိတ်ဆက်ထက်ပိုကခုန်။ ထိုကွောငျ့၊အမှု၌ထိပ်တန်းအလှ၊ရုပ်ရှင်ကိုချစ်ရမည်လည်းအဘယ်သူမျှမလမ်းအတွက်။ အမေရိကန်အကအခုန်ရုပ်ရှင်၏ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြ၊အနှစ်၏ဤအ ဖြစ်ဖို့ထက်ပိုပြီးဘာမှမအဘဲလေးချေ။ တစ်မိန်းကလေးစတင်လူငယ်တစ်ဦးကောင်လေးတစ်ယောက်အဖြစ်။ ဘောလုံးအသင်း-မေတ္တာ (မန္ဒါဘိုက်)တို့ကိုတွေ့ရ၏နောင်သင့်ရဲ့ဘောလုံးအသင်းခဲ့သည်ရွးေကာက်။ အဖြစ်သူမ၏အစ်ကဒ္ေ(ဂျိမ်း)မြို့ပြင်သို့ထွက်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အဘို့၊ ကစားအတွက်ကျောင်းနှင့်သူမ၏အစ်ကို၊မိမိနေရာ၌။ ဖြစ််တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်၊သူမ၊သတိမပြုမိအတွက်ဘောလုံးအသင်းအကြောင်းများပါဝင်သည်သာ။ ပိုပြီးအရွယ်ရောက်သည်အပူဆုံးကောင်လေးမှာဂျွန်ရှု။ သူသည်အလွန်အပြည့်အဝမိမိကိုယ်ကိုနှင့်သူရန်စီမံခန့်ခွဲစေဂျိန်းအရှည်ဆုံးဘုရင်မကြီး။ ဒီအမစ်ရှင်၊ဒါပေမဲ့ပထမဦးဆုံးသူတစ်ဦးထံမှအကြံဉာဏ်လိုအပ်ညီမဖြစ်သူကက်သရင်း။ ပိုပြီးပြီးနောက်နှစ်အရွယ် ရှိပါတယ်နှင့်အတူသူမ၏ရှည်လျား-အချိန်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေ အိပ်ပျော်သောအခါသူမသည်တက်ကြွသောကိုယ်ဝန်ဆောင်။ တစ်ခြွင်းချက်အတွက်အစအဦး၏ဆယ်ကျော်သက်ရုပ်ရှင်များကိုချစ်။ ပြောပြသူမ၏ဖခင်နှင့်အဆင့်-မိပထမဦးဆုံးသောမိန်းမသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်လိုလားကလေး တစ်ဦးကိုယ်ဝန်။ ပိုပြီးအမျိုးအစား:လုကာကပင်ဂျာမသရုပ်ဆောင်:ရှဲ ၊မွေးမြူရေး ၊မော မဿဲအလှကုန်ပစ္စည်းအတွက်အရည်အချင်းအထက်တန်းကျောင်း၊ဒါပေမယ့်သူ့ကိုမှအဓိပ္ပါယ်အတွက်အသက်ပျောက်နေသည်။ ထိုအခါချစ်စရာကောင်းတဲ့ မွီျသို့လှုံ့ဆျောအိမ်နီးချင်းနှင့်သူ၏တစျခုလုံးကိုအသက်တာ။ အပြောင်းအလဲ။ ၏စုံတွဲတစ်တွဲအလွန်ကြီးစွာသောရက်သတ္တပတ်နှင့်အတူသူမ၏နှင့်အမင်္ဂလာရှိ၏။ ထိုအခါမူကား၊မိမိအဆွေခင်ပွန်းကိုသူ့ကိုပြသောဗွီဒီယို အဖြစ်တစ်ဦးညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်မင်းသမီး။ ပိုပြီးပြီးနောက်နှစ်အရွယ်ဂေါ့သူမ၏ဘဝတစျခုလုံးအာဖရိကအတွက်၊နှင့်အဆက်မပြတ်အိမ်မှာကျောင်းလာတက်ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့အခုနှင့်အတူသူမ၏မိခင်အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အနောက်မြောက်တက္ကသိုလ်မှ။ ဂေါ့အချို့နှင့်အတူဒုက္ခအမျိုးမျိုးမှာလူအများပြည်သူကျောင်း၊ဒါပေမဲ့ရရှိထံမှအကူအညီသူမ၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်။ ပိုပြီးအမျိုးအစား:ခရစ်ယာန်:၊ ၊ ရယ်စရာနှင့်အချစ်မှာအချိန်တည်း။ ပေမယ့်က်ေသင္ၾအရာအားလုံးနှင့်အတူလုပ်၊အမုန်းပြင်သစ်၊သူတူမေတ္တာ၌ကျရောက် ။ ဒီ ကျူးလွန်မှကျောင်းသားများနှင့်အတူဖလှယ်။ အထင် ၊သူကကြာအစိတ်အပိုင်းအတွက်ဒီကျောင်းသားဖလှယ်။ ပိုတ၏ဂန္ထဝင်ဆယ်ကျော်သက်ရုပ်ရှင်များကိုချစ်။ အလွန်ရေပန်းစားကောင်လေးတစ်ယောက်ကသူ့ကျောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သောလှည့်နိုင်မည်သည့်မိန်းကလေးကျောင်းသို့ကုသမှု။ ထို့ကြောင့်သူသည်အိပ်ပျော်တီသူ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူ၊တစ်ဦးအလောင်းနှင့်အကြိုးစားနေဖို့အလုပ်အတွက်ရက်သတ္တခြောက်ပတ်မှ အရှည်ဆုံးဘုရင်မကြီး။ ပိုမိုဝယ္ယူႏိုင္ေအို ဆုံးဖြတ်နှင့်အတူနှစ်ပေါင်းများအတွက်သူ့ရည်းစားနဲ့သူကလေး၊ဒါပေမယ့်ဆန့်ကျင်နေတဲ့အားကစားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖြစ်ဘတ်စကက်ဘောကစားသမား။ နောက်ပိုင်းတွင်သူ၏အသက်တာ၌၊ဒါကြောင့်မကြာခဏသူကျေနပ်သည်၊နှင့်ဤကိုလည်းကွာရှင်းခြင်းအဘို့အသူ၏ဇနီး။ ပင်မိမိသားသမီး၊သူပေးနိုင်ပါတယ်မိမိကျေနပ်မှုခံစားရတယ်။ ပိုပြီးမဟာမိတ်များသည်နှစ်ဟောင်းနှင့်အသစ်များအတွက်အဆိုပါမြို့။ သူမသည်အထက်တန်းကျောင်းတွင်လေးများ၊နှင့်အလျင်အမြန်ရှာတွေ့။ သုံးခု၏အပေါင်းအဘော်-သင်ယူခံရဖို့ပေါ်လာအလွန်ကောင်းစွာလူသိများသည်၊အဖြစ်ရှိထားသူလျှင်လူသိများ၊ဒီအသူမ၏ဘဝတစျခုလုံး။ မဟာမိတ် နားလည်ရန်လိမ့်မည်ဟုအလွန်ကြီးမား၍အတူအာ၊ဒဏ္ဍာကွန်ပျူတာကနေသူတို့ရဲ့တာဝါတိုင်။ အလွန်အောင်မြင်သောအကအခုန်ရုပ်ရှင်နှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်ဒါေပမယ့္ ။ မိမိအပြီးပြည့်စုံသောကိုယ်ခန္ဓာ၏အသိသမ် လည်းစှဲဤအခန်းကဏ္ဍတွင်။ ရာဇဝတ်များကိုဖြည့်ဖို့နာရီအခြေခံ။ ဖြစ်ချင်တော့၊အတွက်အနုပညာကျောင်းများအတွက်သိပ်ပြီး၊အဆိုတော်နှင့်ဂီတပညာရှင်။ ဒီဆယ်ကျော်သက်မြောသည်ပုံမှန်အမေရိကန်:အရှက်တော်မလျော်ရန်အတွက်အကောလိပ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ပိုက်သမား-ဘခဲ့ဆွဲမအမူအခါသမယသည်သူတို့၏ကျောင်းမှ။ ဖြစ်လာမိတ်ဆွေနှင့်အတူအဟောင်းကနေအခါသမယ-ဦးခေါင်းအတွက်ရာခေလသည်။ အဆိုပါရွှေရောင်ပါဘူး၊ဟုတ်ပါတယ်။ ပိုပြီး၏အစအဦး၏အကျော်ကြားဆုံးသွေးစုပ်ကိုင်းအလားအလာ၊စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အသက်ရှု။ လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်မျက်နှာအတွက်ကျောင်း။ သူမအသက်အနှစ်နှင့်ပြောင်းရွှေ့အတွက်နှင့်အတူသူမ၏ဖခင်အတွက်အသေးစားမြို့။ ကတည်းကအပေါင်းကောင်းသောနှင့်ဖွင့်လှစ်၊သူမသည်တွေ့လျှင်အလွန်လျင်မြန်စွာအ ချိတ်ဆက်အတန်းအတွက်။ ဒါပေမယ့်သူမအတွက်သာစိတ်ဝင်စားတစ်ဦးပုံမှန်မဟုတ်သော။ ပိုပြီးအမျိုးအစား:စိတ်ကူးယဉ်ချစ်ဇာတ်လမ်းညွှန်ကြားရေးမှူး:ရောဘတ်ပတ်တင်ဆန်၊လြှို့၊တေလာလုပ်ရ၊စည်းမျဉ်းနှင့်သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်အက်ဒွပ်မှတွေ့ကြပြီဟုအသီးအသီးအခြား၊အဟုတ်ကဲ့-စကားလုံး၏ရှေ့တွင်၎င်းတို့၏မိသားစုများနှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများ။ သငျသညျနောက်ဆုံးမှာပျော်ရွှင်ရန်နှင့်အတူတကွအတွက်ညာဉ်၏လက်ထပ်တိုင်အောင်၊သူတို့အဘယ်အသေခံ။ အစဉ်ကာလအတွင်းရီးလို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရရှိသွားတဲ့။ သင်၏ကလေးသည်တစ်ဝက်လူတစ်ဝက်သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်နှင့်ကြီးထွားလာသည်အလွန်လျင်မြန်စွာ။ ထို့ပြင်၊အဆိုပါ ဘုရားသခင်အဖို့ပျော်စရာလဲလှယ်နှစ်ဦးအလောင်းတွေ: နှင့်နေသောများမှာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်ရှိသည်လူသိများအသီးအသီးအခြားအဘို့တစ်ဦးထာ။ နှစ်ဦးစလုံးဆယ်ကျော်သက်အလွန်ကွဲပြားခြားနားကြသည်နှင့်အစဉ်အမြဲအသီးအခြားဆန့်ကျင်: မှကြွလာတစ်ခု မိသားစုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ပေါ်နေသောအပင်ကင်းပြီးအေး:ပိုပြီးအအေးဆုံး၌ညကျောင်းယောဟန် ၏ကြယ်ဘတ်စကက်ဘောအသင်း။ သူသေမယားမီးကိုအသုံးပြုသည်၊မိမိအကောင်းသောရူပနှင့်သင္ကေက်ာင္းသား နှင့်မောင်းရန်သီချင်းများ။ အဆွေခင်ပွန်းသုံးယောက်ထွက်ရသည်၊နှင့်ချိတ်ဆက်သာအချင်တစ်ချက်:။ ထို့ပြင်၊အဆိုပါကြံစည်မှု၏ဤချစ်စိတ်ကူးယဉ်ရုပ်ရှင်အထားတွင်တစ်ဦးတိတ်ဆိတ်သောရွာ။ ဆယ်ကျော်သက်အဆိုပါပျင်းသည်၊နှင့်မျှမိတ်ဆွေအကြားရွာ၊သူသိထာ။ အမည်မသိနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မိန်းကလေးတစ်ဦး၏ဦးခေါင်း။ နှစ်ဦးစလုံးမေတ္တာ၌ကျရောက်နှင့်နောက်ဆုံးမင်္ဂလာရှိ၏။ ပိုလို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်နှင့်အက်ဒွပ်ဖြစ်လာကြပါပြီပျော်ရွှင်သောမိဘများ၏။ အလွန်ခက်ခဲသည့်မွေးဖွားသောကြောင့်သာအက်ဒွပ်လှည့်သို့သူမတစ်ဦးသွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်။ အဆိုပါမိန်းကလေးဂုဏ်သတင်းသည်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာ၊နှင့်အနေို။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကလေး၏အဆွေအ စတင်ခဲ့သည် ငြင်းနှင့်အတူ ၊ဒါကြောင့်အားလုံးအတွက်အဆုံးသတ်တဲ့။ ပိုဆယ်ကျော်သက်ရုပ်ရှင်များကိုချစ်သင်ဆောင်များအတွက်အဓိကဇာတ်ကောင်နှင့်မျှော်လင့်ကြောင်းအရာအားလုံးကိုအဆုံးသတ်။ တချို့ဆယ်ကျော်သက်ရုပ်ရှင်များကိုချစ်အလွန်ရယ်စရာအနေဖြင့်အခြားဆယ်ကျော်သက်ရုပ်ရှင်များကိုချစ်ဝမ်းနည်းဖွယ်အကို အသက်နှင့်အတူရောဂါ။ ဒါပေမဲ့ဆယ်ကျော်သက်ရုပ်ရှင်များကိုချစ်ကြောင်းပြသသင့်အမြဲတမ်းတိုက်ပွဲအတွက်ဒုတိယအခွင့်နှင့်စစ်မှန်သောအချစ်တတ်ဝေးထက်ကျော်လွန်သေခြင်းနှင့်တချိန်တည်းမှာပင်သင်အနားယူနိုင်မတွက်ဆယ်ကျော်သက်ရုပ်ရှင်များကိုချစ်အံ့သြဖွယ်သောကြောင့်၊သင်ပြီးသားကိုသိသောဆယ်ကျော်သက်ရုပ်ရှင်များကိုချစ်ယူ၊နှင့်မဆိုအကောင်း။
ဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်အပေါ်အခွန် သတိရကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်:"ပေးဆောင်အခွန်အခများနှင့်တိုက်ရိုက်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်"ဘယ်လျှင်အခွန်"အခွန်ပေးဆောင်လိမ့်မည်"။ ကျနော်တို့ဒါကြောင့်အသုံးပြုအမြဲဆပ်၊တစ်ခါတစ်ရံတွင်မေ့လျော့သောအရည်အချင်းပြည့်များအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်။ အကြံဉာဏ်၏အခွန်ရှေ့နေလိမ့်မည်သင်တို့သိရကြကုန်အံ့ရာ။ လျှင်သင်ဖိတ်ကြားချက်ကိုလက်ခံရရှိရန်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အခွန်ရုံးရှေ့မှာရှိသွားရန်၊ဆက်သွယ်ရန်"ငါ့မိသားစုရှေ့နေ"။ အခွန်ရှေ့နေလိမ့်မည်ကိုပြင်ဆင်စာရွက်စာတမ်းများ၊သင်ဆန္ဒရှိလျှင်၊အလည်အပတ်အခွန်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်၊လွှတ်ပေးထံမှသင်တို့နှစ်မြို့ဖွယ်။ အကူအညီအားလုံးနှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံသည်-ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများအရာခပ်သိမ်းကိုပြုလိမ့်မည်အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာ။ ကျနော်တို့ကဖြေရှင်းပေးလိမ့်မည်အားလုံးနှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စများမှအခွန်ကောက်ခံ.
Бясплатны Сайт знаёмстваў Ў Славакіі Ў рэгіёне
ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့အခမဲ့ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်အခန်းပေါင်းချိန်းတွေ့ ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့စုံတွဲများ ဗီဒီယိုစကားပြောချိန်းတွေ့ စူးစမ်း ကြော်ငြာရှာဖွေစူးစမ်း မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ချိန်းတွေ့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ အခမဲ့အရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့ တွေ့ဆုံရန်